トップページ ＞ 言語 ＞ ソマリ語 ＞ Twin Seoul ayaa martigelin wareega afaraad "orodyahanka iyo chaser (muddo aamusan, muddo fadhiidka ah)" iyo
Iyada oo hab dhabta ah
mataanaha Seoul heli [3500 yen qiimaynta Free] in psychics waa toddoba marxalad, runtii in tallaabada ilaa la dhisnayd in mid ka mid ah nafta, wareega afaraad waa muddo runtii daran waxay noqdaan. In marxaladan, maxaa yeelay, labada nijaasta waxaa soo socda.
si adag isku dhaceen wareega saddexaad, ka dib markii la kulma xanuunka qoto dheer midba midka kale, mid ka mid ah waa gargaarka ah si aan u adkeysan xanuunka, iyo wareer in kale waxa uu ahaa si lama filaan ah iska dhinaca kale, sidaa darteed bay eryan soo horjeeda ee I.
fog this, uma baahnid inaad si loo yareeyo ilaa inta aadan iska tuurina ego in ay sababtay muran ee labaad marxaladda saddexaad. Mararka qaarkood, waxa ay sidoo kale in ay sii wadi doonto soociddiisa ee gobolka muddo cadaalad waqti dheer.
Laakiin macnaha dhabta ah ee xilligan la joogo ma aha in aad ogaatid in ugu cuslaataan dhinaca kale in mar ka tegey, aan, si sida in ay ujeedadoodu tahay baraaruga ruuxi ah si kor loogu qaado iyaga u gaar ah. Haddii Kizukeru xaalkaas, noqon doontaa tijaabo weyn ee wareega afaraad.
ego iyo fikradaha haddii ceyrsaneysa more tagaan Twin Seoul xiriirkooda
? orodyahanka iyo chaser
ayaa ururtay in waayo-aragnimo nolosha iyo jacaylkii Chase la soo dhaafay, waxay abuurtaa badan oo diidmada. Markaas, dareen la sameeyo iyo caqli ahaanba u noqon ee gobolka ruxanaya si xoog leh, laakiin aan si Beenin si xoog leh soo horjeeda ee.
Sidaas darteed, mid kasta oo kale oo ka dhacay welwel iyo shaki midba midka kale, sidoo kale waxaan dareemayaa xanuun xoog leh uu soo horjeeda. Haddii aad mar dambe u adkaysan in this, mid ka mid ah waa in ay isku dayaan in ay ka xiriirka ka baxsadaan. Iyo, mid kale oo la baxsanaya hore ee ay si lama filaan ah indhaha, Axsaan Fartuun naf lacaarinimo ah u bartey dib u soo horjeeda. In xiriir this, yaa ka fiican in ay ka cararaan kaalinta labaad ka, tartanka loo gudbin doonaa sida chaser ah.
? dhibaatada u cararay xagga orodyahanka
in ay keento chaser a baraaruga ruuxi ah Waxay noqon lahaa wareersan oo aan ogayn wixii dhacay. Iyo, cidhiidhi orodyahanka qabaa inaan ha dayriyo doonistiisa, waa ay fududahay ama eedayn iyaga u gaar ah u ciil Dari kooxaha ka. Dawladdu waxay aad u xanuun badan, waxaa laga yaabaa in kuwa loo dulqaadan karin.
Si kastaba ha ahaatee, haddii aad si dhab ah laba qof waa naf mataano ah, kaalinta labaad uusan haysan badan cararay, maxaa yeelay, waxaan noqday wax nacaybka chaser ah. Inkasta oo aan si qoto dheer jecel, dareemaan cabsida si ay u eegaan naftayda at in uusan ogaan chaser ah, waa aad cararaan. Tan iyo xidhiidhka ka waa wax heer nafta, ma wax loo maleeyay in karnaa in ay isku dayayaan si loo hagaajiyo.
Sidaas daraaddeed, Chaser, waa in aad iska mar jaceeylka ee kaalinta labaad ku tuuro. Iyo, haddii aan kor u turxaan iyaga u gaar ah, waxaan awoodnaa in aan soo dhaweyn baraaruga ruuxiga ah.
wareega afaraad marka aad toos in kasta oo kale iyada oo in muddo ah, mar taag naftayda at by tago waxaa kasta oo kale, waxaa la odhan karaa in ay dhab ahaantii muddo si loo kordhiyo iyaga u gaar ah si ay u awoodaan in ay naftaada ku jeclahay. Haddii Norikoere mashaqadan, waxaa suurtagal ah in la helo baraaruga ruuxi ah midba midka kale, oo waxay kor ugu yimid in ay jiraan waxaan ugu dambeyntii ay awoodaan in ay sii wado in ay marxaladda soo socota ee nafta mataano.
Haddii aan, waxaan soo dhaweynaynaa kartaa baraaruga ruuxi ah.